Kedu nsogbu ga - eme ma ọ bụrụ na anaghị eji ụgbọ ala ogologo oge? -News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Kedu nsogbu ga - eme ma ọ bụrụ na ejighị ụgbọ ala ahụ ogologo oge?
Oge: 2020-08-27 Hits: 41
Nke mbụ, mee ka o doo anya na ọ bụrụ na enweghi ike itinye ụgbọala ahụ ogologo oge, ọ ga-emerụ ụgbọala ahụ n'onwe ya! Ntụle akọwapụtara sitere na akụkụ ndị a!
1. Ihe eletriki na njikwa nke ụgbọ ahụ, n'ihi na ụgbọ ala ndị dị ugbu a nwere ọgụgụ isi, na njikọta kọmputa na-ejikarị kọmputa elektrọnik kachasị, yabụ ihe mbụ na-ebu isi bụ na batrị ụgbọ ala ga-efunahụ ike. Kedu ihe kpatara ya n'ihi na igwe eletriki ụgbọ ala na njikwa njikwa Mmụba nke ọkọnọ na-ebute mmụba na ọkọnọ ikike ọkọnọ, ọkachasị mmụba na oriri ike nke ụfọdụ ụgbọ ala dị elu mgbe ụgbọ ala gbachichara. Ya mere, ụfọdụ ụgbọ ala agaghị amalite mgbe oge ịdebe ụgbọala gachara!
2. ka nká ma ọ bụ mmebi nke akụkụ roba na akụkụ ndị ọzọ na-achịkwa ụgbọ ala, dị ka taya ndị a dọwara ogologo oge, ike na-enweghị ike nke taya, wdg. akụkụ. E nwekwara corrosion nke breeki diski, wdg. Ọ bụrụ na ụfọdụ ugbo ala ikesiike breeki aka, ọ ga-emekwa breeki aka ghara ịlaghachi nkịtị!
3. Nke kacha emerụ bụ mmebi dị n’elu agba, ọkachasị ụgbọ ala ndị dị n’èzí, ikuku na anwụ tinyere mmiri ozuzo, yabụ mmebi ahụ agba agba ahụ ụgbọ ala kachasị. E nwekwara ogologo oge ikpughere anyanwụ. Ọ na - akpata ihe ndị ọzọ dị n’ime ụgbọ ala ka nká tupu oge eruo. Ọ bụrụ na ọ bụ oge udu mmiri na udu mmiri na ndịda, ntụpọ na isi na ụgbọ ala ga-emekwa!
4. Mmanụ ụgbọ ala gwụrụ, ụfọdụ nsị apụtakwala. Ọ bụrụ na ọ dọwara ya ogologo oge, ụfọdụ mmanụ mmanụ ụgbọ ahụ ga-emepụta sedimenti, ụfọdụ ga-enwekwa mgbanwe kemịkal ogologo oge, ọ ga-emebi ahụ ma ọ bụ mebie akụkụ
Ya mere, na nchịkọta, ihe ndị a niile nwere ike ime, ya mere, a na-atụ aro na onye nwe ya kwesịrị iwepụta oge ịmalite ụgbọ ala ahụ otu o kwere mee ma ọ bụrụ na ejighị ya ogologo oge. A na-atụ aro ka ịmalite ya otu ugboro kwa ụbọchị 7-15. Ọ bụrụ na ọnọdụ kwere, ịkwọ ụgbọala n'okporo ụzọ Otu ọsọ bụ ihe kachasị mma!
Previous: Obi ụtọ na Dragọn ụgbọ mmiri Ememme
Ọzọ: Thegbọ ala ahụ ọ na - eme okenye, mmanụ ụgbọ elu ya dị elu?